Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo uu wato Jen. Caanood oo gaaray Shalambood – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo uu wato Jen. Caanood oo gaaray Shalambood
Allhadaaftimo August 18, 2018 Uncategorized
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya halka ay ku sii jeeday Ciidamo uu wato Abaandulihii ciidamada xoogga dalka ee xilka laga qaaday Jen. C/llaahi Cali Caanood oo maanta gaaray deegaanka Shalambood ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wararka is khilaafsan ayaa ka soo baxaya ujeedka Ciidamada uu wato Jen. Caanood u gaareen Shalambood, waxaana warar hal dhinac ay sheegayaan inay duulaan ku yihiin deegaano ku dhow dhow magaalada Marka,
halka warar kale oo aan la xaqiijin sheegayaan in Jeneraalka uu ka gadoodsan yahay xil ka qaadistii lagu sameeyay, kuna sii jeedo Gobolka Gedo.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga dalka ayaa ka gaabsaday wararka ku saabsan Jen. Caanood iyo ciidamada uu watay ee gaaray Shalambood, iyagoo xaqiijinaya inuu jiray howlgal lagu qaadi lahaa jidka Xeebta ee ka baxa deegaanka Jazeera ee aada Gandarshe illaa Jilib Marka, balse aan qorshaha ku jirin in dhanka Shalambood laga qaado howl galk
Previous Sanaag-bari Oo Gacanta Somaliland Kasii baxaya,
Next Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa sheegay in ay ahayd in dadka Falastiiniyiinta si wanaagsan loo ilaaliyo oo loo difaaco iyada oo loo sii marayo waxa uu ku tilmaamay joogitaan xooggan oo ay Qaramada Midoobay ka muuqto dhulka ay Israa’iil haysato.